Vaovao - Jereo ny fahasamihafana misy eo amin'ny famindrana mafana sy ny fanontana mafana
Anio aho dia hitondra anareo rehetra momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny famindrana mafana sy ny mari-pamantarana adhesive vita pirinty mafana, andao hojerentsika!
Tahaka ny mpanonta thermaly, matetika isika no mahita azy ireo any amin'ny toeram-pivarotana izay ampiasaina amin'ny fanontana receipt, na fanontam-bola POS.Aorian'ny fametrahana taratasy mafana dia azonao atao ny manonta mivantana tsy misy ranomainty na kofehy.Mifanohitra amin'izany, ny vidin'ny ribbons dia somary ambany.
Ny mpanonta kaody bar dia mahazo ny vokatry ny fanontana amin'ny alàlan'ny fanafanana ny lohan'ny printy thermal transfer, ary indraindray dia afaka manolo ny mpanonta mafana.Mety amin'ny fanontana etikety fitehirizana trano fitehirizam-bokatra, etikety vidin'ny fivarotana lehibe, etikety fanafody fitsaboana, marika famantarana logistika, ary etikety vokatra, sns.
Momba ny fahasamihafan'ny fanontam-pirinty mafana sy ny famindrana mafana:
1. Ny voalohany dia momba ny fomba fanontam-pirinty kaody bar
Ny fanontam-pirinty barcode thermal transfer dia maodely roa, izay afaka mampiasa ny fomba fanontam-pirinty mafana sy ny fomba fanontam-pirinty mafana;
Na izany aza, ny mpanonta thermal dia fomba tokana, izay afaka manao fanontam-pirinty mafana ihany.
2. Faharoa, hafa ny fotoana fitehirizana ny marika vita pirinty
Ny marika vita pirinty amin'ny mpanonta barcode transfert thermal dia azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra, izay mety ho herintaona mahery;fa ny etikety vita pirinty amin'ny mpanonta mafana dia tsy azo tehirizina mandritra ny 1-6 volana ihany.
3. Hafa ny vidin'ny entana azo ampiasaina
Mila mampiasa ribbons ny mpanonta printy barcode transfert mafana ary somary lafo ny vidin'ny etikety;Ny mpanonta thermal barcode dia mila taratasy mafana ihany.Mifanohitra amin'izany, ny vidiny dia ambany, fa ny loha printy ampiasainy Ny fatiantoka dia mbola lehibe.
Fotoana fandefasana: Jan-10-2022
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, QR Code Reader Barcode Scanner, China Barcode Scanner, QR Code Barcode Scanner, Barcode Scanner mora, Barcode Scanner, Scanner Barcode tanana, Ny vokatra rehetra